Warbaahinta magaalada muqdisho inta badan oo maanta shaqo joojin ku dha qaaqay
Tan iyo markii uu golaha shacabka kmg ah ee soomaaliya uu ansixiyay sharci ay u aragtay saxaafada madaxa banaan mid caburinaya hawshooda shaqo ayaa isla markiiba waxa ay bilaabeen inay ku dhaqaaqaan howlo markaasi ay dadweynuhu ay ku dareensiinayaan in hawshoodii shaqo ay ka gudan kari waayeen sharci ku sheegaasi.
Waxayna bilaabeen in ay gabi,ahaanba aysan soo qaadin wararka ku saabsan dowladda kmg,ah.
Sidaasi oo ay tahay ayaa maalintii shalay ahayd warbaahinta madaxa banaan ee dalka waxa ay ku dhaqaaqday banaanbaxyo ka dhan ah sharcigaasi iyadoo banaanbaxaasina ka qayb qaadanayeen aqoonyahanno ka kala socday ururrada bulshada iyo dadweyne aad ufarabadan iyadoo dadkii ka qaybqaadanayay banaanbaxaasina ay ku luuqaynayeen saxaafad madax banaan;saxafi xor ah;ayaanu doonaynaa doonimeyno daneestayaal iyo ereyo lamid ah.
Si kastaba ha ahaatee maanta ayaa gabi ahaanba saxaafadda madaxa banaan ee magaalada muqdisho al baabada loo laabay marka laga reebo idaacadda stn oo iyadu ku jirta hawada isla markaana iyadu qaadatay go,aankii kale ee ay qaateen idaacadaha lamidka ah lamana yaqaano sababta dhalisay in ay idaacadani ay ballanka uga baxday warbaahintii kale ee ay lamidka ahayd.
Marka laga reebo idaacadaha waxaa iyana maanta aan soo bixin dhamaan wargeysyadii kasoo bixijiray muqdisho, iyadoo lala xiriirinayo go,aankii saxaafadda.
Ay qaadatay dowladda kmg ah.
Hay,adda warbaahinta bariga afrika ee xafiiskeeda muqdisho ayaa sheegtay in saansaantan sharci ku sheeg ay wax weyn ugaysankarto saxaafaddii soo bulaaleysay tan markii la af gambiyay xukunkii militeriga muddo haatan lagajoogo labo iyo tobansano. Hay,addan dhaleecaynteeda ka sokow waxaa jira caro xoogan oo ay dadweynuhu ka muujiyeen diiditaanka saxafigqa loo diidayo inuu adeegsado xurriyatul, qowlkiisa, waxaa sidoo kale arrintan lagu caburinayo saxafiga iyo sharcigaasba dhaliilay hogaamiye kooxeedyo farabadan oo ay kamidyihiin ,cusmaan xasan cali(caato), xuseen maxamed caydiid iyo moowliid macaane maxamuud.
Xuseen mar uu u warramayay idaacadda isaga taagerta ee lagu magacaabo( codka shacabka) waxaa uu sheegay in dhinaciisa haddii kaalmo saxafiyiintu uga baahdaan uu wax taridoono (kooxdacarta haka waan,toowdo sharci beeneedyada ay ku jahwareerineyso ayna ku caburinayso saxaafadda xorta ah ee umadda u adeegta) ayuu yiri xuseen caydiid oo intaasi sii raaciyay tallaabooyinka ay qaaday waxa uu u yaqaano kooxda ay yihiin kuwo gurracan oo kasoo horjeeda xorriyadda hadalka iyo fikirka saliimka ah.
DOODFURAN: Suxufiyiinta ee Sharciga Saxaafada ee DKG
C/laahi mire (qadaafi) qadaafi114q@hotmail.com
SomaliTalk | Oct 2, 2002
DKG oo Sharci u Soo Saartay Saxaafada
Waa in, Agaasimaha hay�ad warfaafineed aan aqoontiisuna aysan ka hooseyn heer dugsi sare; Tifatiruhuna waa inuu lahaadaa aqoon saxaafadeed oo heer jaamacadeed ah. Wariyayaashuna aqoon saxaafadeed oo heer dugsi sare ah, waa qayb kamida xeerka cusub ee.. GUJI...